Phcoker dia mpanamboatra matihanina amin'ny magnesium L-threonate
miaraka amin'ny rafitra famokarana feno izay afaka miantoka ny famatsiana betsaka amin'ny vovoka magnesium L-threonate.
Maninona isika no mila Magnesium?
Alohan'ny hahafahantsika miditra amin'ny Magnesium L-Threonate Nootropic supplement, mety mila mila mahatakatra ny momba ilay filohany teo alohany ianao.
Ny magnesium dia micronutrient manan-danja, izay mandray anjara mavitrika amin'ny fizotran'ny vatana maro. Ny singa dia manana fihazonana ny fihenan'ny hozatra sy ny fialan-tsasatra, ny sintona proteinina ary ny fiasan'ny neuronaly. Ankoatr'izay dia mifehy ny siramamy amin'ny rà sy mitazona ny tosidra.
Na dia azonao atao aza ny maka magnesium isan-se, ny ankamaroan'ireo fanampin-tsakafo ireo dia aforitra na mifamatotra amin'ny asidra amine. Ny chelala dia manatsara ny fitrohana ny rano, ny fitoniana ary ny famokarana mineraly.
Ny fifantohan'ny magnesium dia avo kokoa amin'ny ati-doha noho ny faritra amin'ny vatana hafa. Mampihena ny fahanteran'ny ati-doha amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny plastika sy ny hakitroka synaptika, izay singa lehibe amin'ny fikarakarana kognita. Ny tsy fahampian'ny magnesium dia mitaky aretina bipolar, dementia, aretin'ny Alzheimer, ratra amin'ny atidoha maranitra, schizophrenia, aretim-pivalanana, fahaketrahana, ankoatry ny toe-javatra hafa.
Ny fampiasana ara-pahasalamana ny magnesium amin'ny fahasalamana ara-pahasalamana dia taolana ifandirana. Ny antony dia satria io mineraly io dia tsy mora miampita ny sakana amin'ny ati-doha. Na izany aza, ny fahitana ny tany Ny vovony Magnesium L-Threonate lasa vahaolana farany amin'ity ankamantatra ity.
Inona ny Magnesium L-Threonate?
Magnesium L-Threonate vovoka dia fitambaran'ny molekiola magnesium sy L-Threonate. Ny akora miakatra ho a nootropic sy fanafody neuroprotective.
Ny fisiany dia nanomboka tamin'ny 2010 rehefa nahitan'i Guosong Liu sy ireo mpiara-miasa momba ny neurosistia hafa ao amin'ny Massachusetts Institute of Technology ny fanampiana mahomby izay nanatsara ny fahalalana ny voalavo. Talohan'ny nahitana an'io dia tsy hitan'ny mpikaroka ny fomba hamoahana maneziôma ao amin'ny atidoha satria voasakana ao amin'ny sakana amin'ny ati-drà ny mineraly.
Magnesium L-Threonate fanampin-tsakafo dia sentetika. Na izany aza, bioavailable kokoa noho ny fitambarana Magnesium rehetra izy io. Ankoatr'izay dia mora miampita ny sakana amin'ny ati-drà izy, noho izany, ny mpisolo toerana farany ny tsy fahampian'ny magnesium ao amin'ny ati-doha. Mampitombo ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha ny 15%.
Tombontsoa magnesium L-Threonate ny atidoha amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny neuroplasticity. Ankoatr'izay dia miasa ihany koa izy amin'ny fampitomboana ireo antony neurotrophic azo avy amin'ny ati-doha, izay misy dikany amin'ny famoronana sela neuronal.
Inona no ampiasaina amin'ny Magnesium L-Threonate?
Magnesium L-Threonate dia ilaina amin'ny fitantanana aretin-tsaina. Ny zava-mahadomelina dia mampitombo ny fifantohan'ny magnesium amin'ny selan'ny ati-doha.
Psychonauts mividy Magnesium L-Threonate ho an'ny tombony nootropic. Mampiroborobo ny fahatsiarovana an-tsehatra, ny fianarana ary ny fanamafisana ny fifantohana. Ny fanampin-tsakafo dia fatra resahina ho an'ireo marary mijaly noho ny fahaverezan'ny fahatsiarovana efa antitra, ADHD, dementia ary ny aretin'i Alzheimer.
Magnesium L-Threonate dia mandray soa ho famenon'ny nootropics
Fanatsarana ny fiasan'ny kognitifa
Ny magnesium dia mamaky avy hatrany ny sakana amin'ny ati-doha noho ny singa Threonate. Ity molekiola ity dia tompon'andraikitra amin'ny fampitomboana ny hakitroky ny synaptika sy ny famindrana neuronal.
Ny fandraisana Magnesium L-Threonate dia manatsara ny fahombiazan'ny saina, ny fifantohana ary ny fitadidiana miasa. Araka ny fitsapana ara-pitsaboana navoaka, ny lohahevitra fandinihana izay naka an'ity fanafody ity dia nitatitra ny fanatsarana ny fahatsiarovan'ny episodika, ny andraikitra ambony ary ny fiheverana.
Miverina ny fahanterana amin'ny ati-doha
Ny fampiasana magnesium L-Threonate dia mamadika ny taonan'ny beantitra. Nanamafy ny mpikaroka fa ny fanafody dia mety hahatonga ny fiasan'ny ati-doha hiseho sivy taona latsaka.
Ny fahanterana dia mahatonga ny ati-doha hihena, hitarika ho amin'ny fihenan'ny saina. Na izany aza, ny famenon-tsakafo magnesium L-Threonate dia miasa amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fahaverezan'ny synapses sy ny fanatsarana ny neuroplasticity. Ankoatr'izay, mitazona ny haavon'ny atidoha maneziôma amin'ny haavon'ny optimum izy.
Manampy ny fanahiana sy ny adin-tsaina ny fanampim-panafody magnesium L-Threonate ADHD. Manazava ny toetranao ny zava-mahadomelina, mamela anao hanana fahazavana ara-tsaina ambony. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny neurotransmitter GABA ary koa ny fanakanana ny fampidirana ireo simika adin-tsaina.
Amin'ny sakana amin'ny ati-dra, Fanampiny magnesium L-Threonate manakana ny hormonina miady saina tsy hiditra ao amin'ny ati-doha.
Ankoatr'izay, mitazona anao tsy hahatadidy fahatahorana izany, fandrahonana tena izy ary traikefa mampivadi-po izay miteraka fanahiana.
Raha tsy mahatsiaro tena ianao, dia afaka mividy Magnesium L-Threonate amin'ny fanamboarana ny tsy fahatokisanao. Ny famenon-tsakafo dia manalefaka ny hozatra amin'ny alàlan'ny alikaola amin'izy ireo. Izy io koa dia mampihena ny kortisol sy ny hormonina miady saina sasany, izay manakana ny melatonin sy ny fahaizana matory.
Fitantanana ny aretina Neurodegenerative
Ny mety ho an'ny Magnesium L-Threonate ADHD fanafody amin'ny fitsaboana ny aretina neurodegenerative banky amin'ny zava-misy fa ireo fepetra ireo dia misy ifandraisany amin'ny haavon'ny magnesium ambany. Ny Neuros Scientists dia mampifandray ny tsy fahampian'ny magnesium amin'ny ati-doha amin'ny ADHD, dementia ary Alzheimer.
Ankoatr'izay, ny fisotroana kapsily Magnesium L-Threonate dia hisorohana ny fihenan'ny saina sy ny fahatsiarovan-tena, izay vokatry ny neurolojia mahazatra ny dementia na Alzheimer.
Ahoana ny fihinanana magnesioma L-Threonate
Ny fatran'ny magnesium L-Threonate dia miankina amin'ny lafin-javatra vitsivitsy, ao anatin'izany ny firaisana ara-nofo, ny taona ary ny fampiasana azy. Ohatra, ny fatra mahazatra ho an'ny zaza 19 ka hatramin'ny 30 taona dia eo amin'ny 400mg raha 300mg kosa ny vehivavy. Izay mihoatra ny 31 taona dia afaka mampiakatra ny habetsany amin'ny 20mg, ho an'ny lahy sy ny vavy.
Rehefa mandray ny nootropic Magnesium L-Threonate hampitomboana ny fahalalana dia mety hitifitra hatramin'ny 1200mg isan'andro ny fatra. Mifanohitra amin'izany, ny habetsahana dia latsaka amin'ny 400mg rehefa mampiasa famenon-torimaso Magnesium L-Threonate ho an'ny toetra hypnotic.
Rehefa mandray an'ity fitambarana ity a sakafo fanampiny, azonao atao ny mampiasa eo anelanelan'ny 1000mg sy 2000mg isan'andro. Ny tsara indrindra dia tokony hizara roa ny kapsily Magnesium L-Threonate ianao ary hitantana azy amin'ny maraina ary fotoana fohy alohan'ny hatoriany.
Misy fiatraikany ve ny fihinanana suplementaire Magnesium L-Threonate?
Ny voka-dratsin'ny magnesium L-Threonate mahazatra dia misy aretin'andoha sy hatory. Ny fatoriana dia fitahiana miova endrika, miankina amin'ny toe-javatra iainanao. Ohatra, raha sahirana amin'ny tsy fahitan-tory ianao, ny zava-mahadomelina torimaso Magnesium L-Threonate dia hanampy anao hahazo maso.
Ity famenon-tsakafo ity dia mety hanelingelina ny fahombiazan'ny fanafody sasany. Mety tsy maintsy manatona ny dokotera ianao rehefa mihinana antibiotika, mpampihena ny hozatra, manify rà, na fanafody ambony tosidra. Ny antony dia satria mety manemotra ny fivarotam-panafody ny manezioma.
Ny fampiasana sy ny fampiharana ny vovo-magnesia L-Threonate
Magnesium L-Threonate dia nootropic mahery. Mampiroborobo ny famoronana fahatsiarovana, ny fianarana ary ny fifantohana. Noho izany antony izany dia fanafody preskara amin'ny fitantanana ny toe-pahasalamana neurodegenerative.
Ny zava-mahadomelina mitebiteby L-Threonate dia mamadika ny sola amin'ny lahy. Ny singa L-Threonate dia mampihena ny tanjaky ny hormonan'ny dihydrotestosteron (DHT), izay tompon'andraikitra amin'ny fihenan'ny volo.
Ankoatr'izay, ny olona manana olana amin'ny torimaso dia mety mampiasa ity fanafody ity hanasitranana ny torimaso. Tsy mampihena ny hozatra fotsiny fa mampitony ny vatana ihany koa mampihena ny fanahiana sy ny fahaketrahana. Ny flick amin'ny alàlan'ny tsikera Magnesium L-Threonate dia manamafy fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia hiaina ny fahantrana fotoana fohy aorian'ny fitantanana ny fanampiana.
Aiza no hividianana vovoka mena Magnesium L-Threonate
Mety voafikitra amin'ny Magnesium L-Threonate ianao izay hividianana mpitari-dalana, raha jerena ny fahazoana ny over-the-counter nootropics dia tsy ara-dalàna any amin'ny ankamaroan'ny fanjakana. Fotoana tokony handinihanao ny fividianana ilay fanampin-tsakafo avy amin'ny fivarotana an-tserasera manan-kery.
Mamoaka mahaleo tena ny vokatrao amin'ny laboratoara voafehy tsara izahay. Azonao atao ny manangona bebe kokoa amin'ny fividianana vovo-magnesia L-Threonate betsaka.
Mahasoa inona ny Magnesium L-Threonate?
Ny takelaka magnesium L-Threonate dia manohana ny fiasan'ny kognita sy ny famoronana fahatsiarovana. Tsy toy ny hafa karazana manezioma, io fitambarana io dia mihanaka amin'ny sakana amin'ny ati-doha. A nootropic neuroprotective.
Ankoatr'izay, ny marary miady amin'ny aretina neurodegenerative dia afaka mividy Magnesium L-Threonate amin'ny fitantanana ny toe-pahasalamany.
Rahoviana aho no tokony hihinana Magnesium L-Threonate?
Tokony handray izany famenon-tsakafo izany amin'ny maraina sy alohan'ny hatory ianao. Iray amin'ny Magnesium L-Threonate ny vokany dia fanina. Noho izany dia mety aminao ny mitantana azy amin'ny alina.
Iza amin'ireo karazana magnesium no tsara indrindra?
Misy karazany dimy mahery Fanampiny manezioma, izay miasa hafa. Noho izany, ny safidinao dia tokony hiankina amin'izay fizotran'ny vatana tadiavinao. Raiso, ohatra, ny Magnesium L-Threonate no safidy farany indrindra ho an'izay aorian'ny fanatsarana ny fahalalana sy fanamafisana ny fiasan'ny ati-dohany.
Tsy toy ny namany, Magnesium L-Threonate zava-mahadomelina tebiteby manana bioavailability avo miaraka amin'ny miampy ny fiampitana ny sakana amin'ny ati-drà.
Magnesium L-Threonate ve mety amin'ny fanahiana?
Ny fandraisana ny takelaka magnesium L-Threonate dia hanamaivana ny toetranao, hampihena ny adin-tsaina ary hanamaivanana ny fitaintainanana. Ny vokany mampitony dia mahatonga azy io ho zava-mahadomelina mampatahotra.
Magnesium L-Threonate ve mety amin'ny tsindry?
Magnesium L-Threonate dia mety hiasa toy ny blocker calcium calcium. Ny zava-mahadomelina dia hampidina ny tosidrà hatramin'ny 5.6 / 2.8mm Hg. Ny fandinihana dia manamafy fa manakana ny aretim-po vokatry ny fivontosan'ny ischemika, ny fiakaran'ny tosidrà, ny aretim-po, ary ny aritimia amin'ny fo.
Ny miampy ny fatran'ny magnesium L-Threonate dia ny ahafahanao mitantana azy amin'ny fanafody antihypertensive maro.
Ny tombo-tsoa magnesium L-Threonate dia hiharihary aorian'ny iray volana, indrindra raha toa ka manambola amin'ny famenon-tsakafo ianao. Mila efatra herinandro farafahakeliny mba hampiakarana azy ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha, izay mety amin'ny famolavolana fahatsiarovana.
Raha mitsabo tsy fahitan-tory ianao dia hiasa eo ho eo ny fanampiana. Ho an'ny tebiteby, famoizam-po ary fikorontanan-tsaina aorian'ny traumatis, ny tsikera Magnesium L-Threonate dia manamarina fa hita ao anatin'ny herinandro ny vokany.
Shen, Y., et al. (2019). Ny fitsaboana ny magnesium-L-Threonate dia manandratra ny haavon'ny magnesium ao amin'ny tsiranoka Cerebrospinal ary mampihena ny fatiantoka môtô sy ny fahaverezan'ny Dopamine Neuron amin'ny maodely voalavo an'ny aretina Parkinson. Aretina sy fitsaboana ny neuropsychiatrie.
Slutsky, I., et al. (2010). Fanatsarana ny fianarana sy ny fitadidiana amin'ny alàlan'ny fanandratana ny magnesium atidoha. Boky 65, Laharana 2, p143-290.
Mickely, AG, et al. (2013). Manezioma-L-Threonate mihinana sakafo maharitra miteraka fahaverezana ary mampihena ny famerenana amin'ny laoniny ny fanilihana tsiro. Farmakolojika, Biokimia ary fitondran-tena, Boky faha-6, p16-26.
Wei, Li et al. (2014). Ny fiakaran'ny maridrefy atidoha dia misoroka ny fahaverezan'ny Synaptika ary mamadika ny tsy fahampian'ny kognitifa amin'ny maodelim-piadiana aretina Alzheimer. Atidoha molekiola.
Zarate, Carlos et al. (2013). Paradigma vaovao amin'ny famoifoizana ny fitsaboana. Annals of the Academy of Sciences of New York.
Wroolie, TE, et al. (2017). Fitsapana misokatra amin'ny marika magnesium L-Threonate amin'ny mararin'ny Dementia. Fanavaozana amin'ny fahanterana, Boky 1.
1.Nahoana isika no mila magnesium?
2.Inona ny Magnesium L-Threonate?
3.Inona no ampiasaina amin'ny Magnesium L-Threonate?
4.Magnesium L-Threonate tombony ho famenon'ny nootropics
5.Ahoana ny fakana Magnesium L-Threonate
6.Misy ve ny voka-dratsy ateraky ny fanampiana Magnesium L-Threonate?
7.Magnesium L-Threonate vovoka fampiasana sy fampiharana
8.Aiza no hividianana vovo-dronono manezioma L-Threonate